Clickfunnels waa #1 taasoo keentay in la abuuro adeegga websites la ujeedada suuq-geynta iyo adeegyada iibinta isticmaalaya dublad si loo kordhiyo gaadiidka iyo hawlgelinta.
Sida shirkad kasta oo kale oo, Clickfunnels uu xiiseynayo inuu keensado on macaamiisha cusub maalin kasta si ay u isticmaalaan software oo ay aad u dhici ay u abuuraan iibka flash in ay bixiyaan muddo dheer ay maxkamad free.
Clickfunnels kordhiyay maxkamad iibka waa marmar iyo dhif ah ee dabiiciga ah, laakiin ay u dhici.
Waxay ka caawisaa si ay u dhisaan xiriir wanaagsan macaamiisha cusub iyo waxa u ogolaanaya inay sahamiyaan oo dhan faa'iidooyinka madal si dhamaystiran.
Muddada la fidiyey waxaa had iyo jeer la siiyay ka dib markii ururinta deg deg ah ee xogta laga xisbiga xiiso iyo kulli ayaa lagu wadaa in ka dib.
Kaalay hesho nuqul ka mid ah Clickfunnels hadda halkan
Sidaas, heli Carruur ah, yeelanina shaqeeyo off iyo in la hubiyo aadan ka maqnaan this gaar ah hal mar dalab.